NK | जसपा पार्टीको दल होइन मधेसको नाममा दलाल हो : नेता मंडल
जनकपुर । जसपा पार्टीको दल होइन मधेसको नाममा दलाल हुन । नाम बेचिएको छ मधेसी पार्टीहरु मधेसको जनताको । आफ्नो खुर्सी सुरक्षित हुन लगायत सबै मधेसी जनताको मुद्दा बिर्सने भयो राजपा र समाजबादी पार्टी । कोइ त केहि उपलब्धि मधेसी जनता लाई भयो मात्रै उपलब्धि भयो मधेसी आफ्नो आफ लाई कहालाउने नेता लाई ।
मधेसी नेता ले देश सङ राजनीति खेलेको छैन मधेसी जनता राजनीति खेलेको छ । छ महिना मधेस आन्दोलनले गर्दा त उपलब्धि जनता लाई भएन यताको मधेसी पार्टी लाई उपलब्धि भएको छ । प्रदेश न.२ मा सरकार पनि बनाउने सफलको साथ बनाउनु सके साथैमा केन्द्र सरकार पनि मन्त्रालय बस्ने मधेसी पार्टीको नेताहरुको सपना पूरा भयो तर मधेसी जनताको सपना पूरा भएन ।
प्रदेश न. २ सरकार भएपनि काम कम र भ्रष्टाचार बदी भएको छ । छ महिना मधेस आन्दोलनले फाइदा जनता लाई भएन मधेसी नेता लाई भएको छ्न मन्त्रालयको गाडीमा आराम ले घुम्ने सकिन्छ तर जो जो सहिद भएको छ उसलाई भैंसी दिएको छ । न हक दिलाउने सके मधेसी पार्टीको नेता जि हरु मधेसी जनताको तर आफू बस्ने लाई ठुलो ठुलो घर र पैसा कमाउने सफल भयो तर सहिद परिवार ले आफ्नो कमाउने उमेरको छोरा पनि घुमाउने भयो अनि अधिकार पनि ।
मधेसी पार्टीहरु सङ प्रश्नहरु
#कहिले मिल्छ सहिद परिवारको पचास लाख ?
#कहिले मिल्छ मधेसी जनताको हक?
#सहिद परिवार ले छोरा पनि घुमाउने भयो अधिकार पनि पाएन तर मधेसी दलका नेताले मन्त्रालय बस्ने सपना पुरा भयो?